चलचित्र क्षेत्रमा सपना बुनिन्छ, सपना बेचिन्छ र सपनामै रमाइन्छ: निर्देशक श्यामराजा श्रेष्ठ » छलफल
हरके मान्छेका आ–आफ्नो सोच चिन्तन र कार्यशैली हुन्छन् । यस्तै फरक चिन्तन र कार्यशैलीका कारण नेपाली कला क्षेत्रको उचाइलाई अझ समृद्ध बनाउन लागिपरेको नाम हो श्यामराजा श्रेष्ठ । उहाँ नेपाली चलचित्रको फाँटमा सशक्त र सफल निर्देशकका रुपमा आफ्नो छवि कायम राख्न सफल हुनुभएको छ । श्रेष्ठले थुप्रै चलचित्रमा निर्देशन गर्र्नुभएको छ भने ती चलचित्रले सफलता पनि प्राप्त गरेका छन् । जसबाट उहाँलाई विभिन्न सम्मान र अवार्डसमेत प्राप्त भएका छन् । सफल निर्देशक श्यामराजा श्रेष्ठसँग छलफल साप्ताहिकका लागि डम्बर बस्नेतले गर्नुभएको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः–
यतिवेबला नेपाली चलचित्रको अवस्था कस्तो छ ?
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण सबै क्षेत्रमा प्रभाव पा¥यो । अझ चलचित्र क्षेत्रमा यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव देखियो । हाम्रा सबै कामहरु ठप्प भए । विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको यो भाइरसका कारण हामीकहाँ पनि थुप्रै समस्या ल्याएको छ । चलचित्र क्षेत्र पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन ।
के गर्दै हुनुहुन्छ यतिबेला ?
कोरोना कहरबाट बँच्दै केही सामाजिक कार्य, केही कला क्षेत्रका कार्यमा आफूलाई संलग्न गराउँदै आएको छु । यस्तै आफ्ना केही व्यक्तिगत र सामाजिक कार्यमा नै आफूलाई व्यस्त राख्दै आएको छु, पछिल्लो समयमा । केही चलचित्रको नयाँ प्रोजेक्टको कुराहरू पनि अघि बढिरहेको छ । परिस्थिति सहज भएपछि अहिले गरेका गृहकार्यले मूर्तरूप लिनेछन् ।
लामो समयदेखि निर्देशनमा हुनुहुन्छ, एक्सन कट कतिको गाह्रो काम हो ?
आफ्नो काम हो, त्यस्तो गाह्रो लाग्दैन मलाई । आफ्नो पेसा हो, काम हो, पूजा हो । सुरुका दिनहरूमा अलिक अप्ठ्यारो लाग्थ्यो तर काम गर्दै जादा सिकिन्छ, सिक्दै जाने कुरा हो । मलाई के लाग्छ भने फिल्म मेकिङ नै टफ जब हो । खालि एक्सन कट मात्रै होइन, यो निकै वृहत छ । यो गाह्रो विधा हो । फेरि चलचित्रको टिम क्याप्टेन भनेको निर्देशक नै हो । एउटा स्क्रिप्टलाई कसरी आकर्षक बनाएर प्रस्तुत गर्ने, कलाकारमा भएको अन्तरनिहीत क्षमतालाई कसरी प्रष्फुटित गराउने भन्ने जिम्मा निर्देशकमै हुन्छ । निर्देशकले हरेकपल्ट नयाँ नयाँ क्रियशन दिन सक्नुपर्छ र हरेक सटलाई कसरी राम्रो बनाउँने भनेर तल्लीन हुनुपर्छ ।
राम्रो चलचित्र बन्नका लागि निर्देशकको नै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ होइन ?
माथि पनि भने समग्र चलचित्रको टिम क्याप्टेन निर्देशक हो । तर पनि चलचित्र निर्माण भनेको सामूहिक कार्य हो । सबैले राम्रो गर्न सक्दा नै एउटा राम्रो चलचित्र बन्ने हो । हामीकहाँ धेरै कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ जसका कारण निर्देशकले चाहेर पनि चलचित्रमा के के कुराहरू समावेश गर्नुपर्ने हो त्यो सकिरहेको हुँदैन । निश्चित पनि तपाईंले भनेजस्तै एउटा राम्रो चलचित्र बन्नका लागि निर्देशकको भूमिका महत्वपूर्णचाहिँ अवश्य हुन्छ ।
के–के कुराहरू आवश्यक हुन्छ राम्रो चलचित्रका लागि ?
मुख्य कुरा त स्क्रिप्ट राम्रो हुनुप¥यो । चलचित्र कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा क्लिएर दिशा निर्देश स्क्रिप्टले गर्ने गर्दछ । हामी प्रिमेकिङमा जब छलफल गर्छौ, स्क्रिप्टका विषयमा छलफल गर्छौ, चलचित्रलाई लिएर जब कार्यशाला गर्छौ त्यसैअनुसार नै चलचित्र बन्ने हो । हाम्रो एक खालको कन्सेप्ट बनेको हुन्छ । त्यो कन्सेप्टलाई भिजुअलका रूपमा चलचित्र निर्माण गर्ने हो । एउटा चलचित्र राम्रो बन्नका लागि निर्देशकको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ नै सँगसँगै सम्पूर्ण टिमको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । स्पट ब्वायदेखि लिएर सबैको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ राम्रो चलचित्रका लागि ।
अहिलेसम्म आउँदा यो क्षेत्रमा के योगदान गरेको छु जस्तो लाग्छ ?
हो, लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा रहेर आफूले जानेको र पृथक कुरा पस्किने प्रयासमा छु म । अझै पनि यो क्षेत्रमा मैले धेरै गर्नु बाँकी नै छ ।
सिनेमा क्षेत्र हल्लै हल्लाले चलेको भन्छन नि ?
चलचित्र क्षेत्र मनोरञ्जनको क्षेत्र हो । यो ग्ल्यामरको क्षेत्र हो । अन्य क्षेत्रमा भन्दा यस क्षेत्रमा भए गरेका कुराहरूले अलिक धेरै चर्चा पाउँछन् । फेरि यो क्षेत्र भनेको सपनाको खेती पनि हो । जहाँ सपना बुनिन्छ, सपना बेचिन्छ र सपनामै रमाइन्छ ।
त्यो सपनामा आफूँलाई कहाँनेर पाउँनुहुन्छ ?
यो सपना पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ मेरो पनि । चलचित्रको सपनाभित्र यथार्थमा पाउँछु आफूलाई । वास्तविकतामा पाउँछु । चलचित्रको सपनाभित्र यथार्थ खोज्ने काम गर्छु ।
तपाईं आफूलाई कस्ता सिनेमा दर्शकले मन पराउँछन् जस्तो लाग्छ ?
अहिले चलेका सिनेमा जनजिब्रोमा झुण्डिएका बोलीचालीका टिपिकल नेपाली भाषाका छन् । हामी एकअर्कामा बोल्ने भाषामा बनेका चल्छन् । आयातितभन्दा पनि हाम्रो परिवेश, बोलीचालीका भाषा, आफ्नै मौलिक कथा टपक्क टिपेर बनाएका सिनेमा दर्शकले रुचाउँछन् ।
कत्तिको फड्को मा¥यो जस्तो लाग्छ नेपाली सिनेमाले ?
नेपाली सिने इतिहासले आफ्ना विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । यो अवस्थामा आइपुग्दा हामी जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुग्न सकेका छैनौ । तर, कछुवाको गतिमा हिँडेको हाम्रो चलचित्र क्षेत्र ओस्कारमा समेत नोमिनेसन हुनु राम्रो कुरा हो । किनकी सिने क्षेत्रका लागि अन्तिम विन्दु भनेको ओस्कार हो । अहिले धेरै माथि छ सिनेमा क्षेत्र । पछिल्लो समयमा यो क्षेत्रमा राम्रै भइरहेको छ तर यसलाई अझ राम्रो र परिस्कृत बनाउन जरुरी छ ।
श्यामराजा श्रेष्ठ सफल निर्देशक हो ?
मैले आफैँले आफैँलाई सफल असफल भन्ने भन्दा पनि मैले निर्देशन गरेका कति चलचित्र सफल भए भन्ने कुराले यसको पुष्टि गर्दछ । म आफैँले आफैँलाई सफलभन्दा पनि राम्रो काम गर्ने अर्थात राम्रो चलचित्र बनाउने कोसिस गरेको हुन्छु, मेलै निर्देशन गरेका हरेक चलचित्रमा । मैले निर्देशन गरेका चलचित्र दर्शकले मन नै पराएको पाएको छु भने मैले निर्देशन गरेका केही चलचित्रले अवार्डहरू पनि दिलाउन सफल भए । सफल असफल भन्ने जिम्मा दर्शककै हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
अहिलेको नेपाली चलचित्रको बजारलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
चलचित्रको बजार तपाईं हामीले सोचेजस्तो छैन । राम्रा चलचित्र बने पनि दर्शकको माया पाउन नसकिरहेको पछिल्लो अवस्था हो । केही चलचित्रले राम्रै व्यापार पनि गरिरहेका छन् । हाम्रा चलचित्रहरू सबैलाई एउटै टोकरीमा हाल्नु राम्रो होइन, यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको चलचित्रको विश्व बजारलाई हेर्ने हो भने पनि यसमा सय प्रतिशत सफलता नै हुन्छ भन्ने छैन । हामीकहाँ बनेका चलचित्रमध्ये पनि दश प्रतिशतमा सफल चलचित्र छन् जुन आशा लाग्दो कुरा नै हो । यति चलचित्र चल्नु पनि राम्रै पक्ष हो भन्ने मान्यता राख्दछु म । नेपाली चलचित्रले आधा शताब्दीको यात्रा पूरा गरेको छ । इतिहास नियाल्दा हामीलाई गौरव लाग्दछ किनकी नेपाली चलचित्र उद्योग एक परिष्कृत अवस्थामा आइपुगेको छ ।
चलचित्र बनाउनभन्दा चलाउन गाह्रो छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
कसले बनायो कस्तो बनायो भन्ने कुरा हो । चलचित्र चलाउन गाह्रो छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ ।
चलचित्र दर्शकहरूको चाहना, रूचि र चलचित्र हेर्ने तरिकामा बदलाव आएको हो ?
हो, संसारभर द्रूत गतिमा प्रविधिको विकास भइरहेको छ, जसले चलचित्र दर्शकहरूको चाहना, रूचि र चलचित्र हेर्ने तरिकामा व्यापक बदलाव ल्याएको छ । नेपाली चलचित्रका निर्माता, लेखक, निर्देशक, कलाकार, प्राविधिक र वितरण पक्षले यस विषयमा विशेष रूपमा आत्मसमीक्षा गरी केही नयाँपनको आविष्कार गर्न अनुरोध गर्दछु । साथै, चलचित्रसँग सम्बन्धित सबै सरकोकारवालाहरूले दर्शकको रूरुचि र चलचित्रको गुणस्तर वृद्धि गर्दै÷गराउँदै नेपाली चलचित्रको बजार गाउँ बस्तीदेखि सहर बजारहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न विशेष प्रयास गर्नु हुनका लागि पनि अनुरोध छ ।
सबै मानिसलाई सबै प्रकारका व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता छ तर कुनै पनि व्यवसायको केही पूर्वसर्तहरू वा आधारभूत मापदण्ड हुन्छन् । जस्तै– वस्तुको गुणस्तर, उपभोक्ताको चाहना र रूचि, लागत, बजार आदि । अतः सबै नयाँ निर्माताहरूलाई यी तथ्यहरूमा विशेष ध्यान दिएर चलचित्र निर्माणमा संलग्न हुन अनुरोध गर्दछु । त्यस्तै, पुराना चलचित्र निर्माताहरूलाई दर्शकको रूचि र चलचित्रको गुणस्तरमा उचित ध्यान दिएर मात्र चलचित्र निर्माणको काममा सक्रिय हुन अनुरोध गर्दछु । हरेक वर्ष लाखौंका संख्यामा नयाँ चलचित्रका दर्शक संख्या थपिँदैछ ।
हिन्दी सिनेमा मात्र होइन नेपाली सिनेमालाई पनि माया गरौं । हिन्दीको पैसा विदेश जाने हो कमसेकम नेपाली चलचित्र हेर्नु भयो भने त्यो पैसा यही देशमा रहने छ र यहाँको यस क्षेत्रमा लागेकाहरूको प्रमोट हुने छ । आफ्नो पहिचान, कला, संस्कृति हाम्रो धरोहर हुन् । यसलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो, कत्वर्य हो भन्न चाहन्छु तपाईंहरूको यो लोकप्रिय मिडियामार्फत ।